Mendrika ny hividy iPhone 6 any New York ve ianao? | Vaovao momba ny dia
Mendrika ny hividy iPhone 6 any New York ve ianao?
Ny Apple Store, amin'ny 5th Avenue, fijanonana tsy maintsy atao ho an'ireo tia teknolojia
Raha handeha ho any New York ianao, angamba, raha tia teknolojia ianao, ny iray amin'ireo fanontaniana tonga ao an-tsainao dia hoe mendrika ve ny mividy maodely farany an'ny telefaona Apple any. Eny, talohan'izay dia eny tokoa ny valiny; fa, ankehitriny, ny marina dia miaraka amin'ny fihenan'ny sandan'ny Euro, dia io tsy misy karama hividianana ny iPhone amin'ny Big Apple, nefa lafo kokoa aza.
Ny Apple iPhone vaovao, ny iPhone 6, dia mitentina € 699 any Espana (miaraka amin'ny VAT) ary any New York dia mitentina $ 699 (izany hoe € 678,64 amin'ny fotoana iray ihany ary mitentina manodidina ny vidiny 735,48 €, eo ho eo).
Ka, araka ny hitanao, ny fividianana iPhone, mandritra ny dianao mankany New York, dia tsy mahasoa ary raha, ho fanampin'izany, ianao koa dia tsy maintsy mihevitra ny olan'ny Doany Rehefa mividy iPhone vaovao anao any New York, ka amin'izany rehetra izany, dia ho mora vidy kokoa, raha te hividy telefaona Apple ianao noho ny any Espana.
Fa ajanony rehefa miovaova ny tahan'ny fifanakalozana ary tombony kokoa ho an'ny eropeana ny mividy any New York, ny marina dia raha lehibe kokoa ny herin'ny Euro, ny marina dia ho mora vidy kokoa ny vokatra (manodidina ny 200 euro eo ho eo) ary, ankoatr'izay, koa Mety ho fahatsiarovana mahafinaritra ny dia ataonao any New York.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Etazonia » Mendrika ny hividy iPhone 6 any New York ve ianao?